GRM Ọdịnaya Ọrụ Platform: Na-eweta ọgụgụ isi na usoro azụmahịa gị | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 2, 2018 Douglas Karr
Nyiwe Enterprise Management (ECM) na-aga n'ihu na-aga n'ihu ịkwalite onyinye ha, ọ bụghị naanị ịghọ nchekwa akwụkwọ, mana ị na-enye ọgụgụ isi maka usoro azụmaahịa. GRM's Content Services Platform (CSP) karịrị usoro njikwa akwụkwọ. Ọ bụ azịza ebe enwere ike ịmepụta dọkụmentị enwere ike ịmekọrịta arụmọrụ azụmahịa. GRM si CSP na-enye ohere a usoro njikwa ọdịnaya (CMS) iji jikọta nchịkọta data, mmụta igwe, njide data ọgụgụ isi, na ngwanrọ DMS iji jikwaa dọkụmentị, nsụgharị nsụgharị, atụmatụ nchekwa teknụzụ dị elu, kensinammuo njikwa azụmahịa (BPM) na Ngwanrọ Njikwa Arụ Ọrụ (WMS).
Nke ahụ bụ ọtụtụ mkpụrụedemede mkpụrụedemede 3!
Akụkụ nke GRM's Content Services Platform gụnyere:
Akpaghị aka na Streamline Filiks - Ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị dị ka iwu ịzụta ma ọ bụ nhazi nkwupụta na-abụkarị ntuziaka, na-adịkarị mfe igbu oge na njehie, ma na-ebutekarị nnukwu nsogbu mgbe emebiri. Site na ọrụ ọdịnaya ọdịnaya GRM, ị nwere ike iji aka rụọ ọrụ dị mfe ma mezie usoro dị otú a. CSP anyị na-esochi mmemme ndị ọrụ niile yana ndozi ederede ka ha na-emekọ ihe n'otu oge, ma na-akwalite ọganiihu n'usoro iji rụchaa ọrụ dị oke mkpa.
Sistem Njikwa Ọdịnaya Enterprise - usoro ọrụ ha dị na ya bụ usoro njikwa ọdịnaya nke ụlọ ọrụ AI nke na-ewepụta ma na-edozi data na-akwadoghị, ọbụna site na usoro ihe nketa, ma melite usoro azụmahịa. Anyị agafeela mbinye aka elektrọnik. Ọ bụ CSP emere maka njikarịcha usoro azụmaahịa yana ịnweta ọpụpụ, ọbụlagodi na ngwaọrụ mkpanaka.
Akwụkwọ Lifecyle Management - GRM na-enye ọrụ niile nke njikwa akwụkwọ nke nwere ike ibugharị ma gbanwee faịlụ akwụkwọ n'ime akwụkwọ dijitalụ, wepụta data, kewaa ndekọ, ma mee ka ha dị njikere ijikọ aka na usoro azụmaahịa ụlọ ọrụ gị. Ihe na-ewe ọtụtụ awa ka emezuru ugbu a na sekọnd. Mgbe ị na-ejikwa usoro njikwa arụ ọrụ, nwee obi ike na edobere ndekọ gị niile na nchekwa akwụkwọ igwe ojii anyị ma ọ bụ na ebe nchekwa akwụkwọ akwụkwọ ha, enwere ike ịnweta ha mgbe ọ bụla ịchọrọ ha.
GRM siri ike, igwe ojii ikpo okwu ọrụ ọdịnaya (CSP) bụ usoro ngwangwa na nke nwere ike ịba ụba nke nwere usoro nke akụrụngwa na ike nke na enyere ndị azụmaahịa aka ịchịkwa data ha - ịhazi na iji ya rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma. Otu n'ime ikike ndị ahụ bụ Ọrụ Nchịkọta Ọrụ, ọrụ nchịkọta amụma na-enye nghọta oge ka ndị ọrụ wee nwee ike ịchọpụta nsogbu na ohere ndị nwere ike ị ga-arụ ọrụ ngwa ngwa.
Nchịkwa Ozi GRM bụ onye na - eweta usoro njikwa usoro ihe ọmụma. GRM siri ike, igwe ojii na-arụ ọrụ ọdịnaya na-arụ ọrụ dị ka etiti nke usoro dijitalụ nke GRM na-enye ndị ahịa ya. Na-eje ozi dị iche iche nke ọrụ dịka nlekọta ahụike, gọọmentị, iwu, ego na akụrụngwa mmadụ, GRM na-anapụta ndị ahịa ya ọrụ dị ka ntụgharị dijitalụ, ngwanrọ weghaara data, sistemụ njikwa akwụkwọ, arụmọrụ arụmọrụ, nnabata data ochie, nnabata na ọchịchị, azụmahịa njikwa usoro na ike nyocha dị elu, yana ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke nchekwa akwụkwọ, nyocha na ọrụ njikwa ndekọ anụ ahụ.
Tags: usoro azụmaahịaojii akwụkwọ nchekwaCMSPlatform Services ọdịnayaMkpunchịkọta datangwanrọ nchịkwa dataọchịnchekwa akwụkwọECMEnterprise Ọdịnaya Managementgmọgụgụ isi data jidengwa igweakwụkwọ akwụkwọnsụgharị nsụgharịusoro nhazi ọrụ